कोरोनाले थोरैलाई मार्नेछ, धेरैलाई बचाउनेछ डा. रवीन्द्र पाण्डे
खुसी कुनै पदार्थ हैन । यो मनको अवस्था हो अर्थात State of mind हो । त्यस्तै दुख एबम् तनाब पनि मनका अवस्था हुन् । यी अवस्थासंग समभाव राख्ने, बिचलित नहुने तथा धैर्यता भएको व्यक्ति जीवनको लामो यात्रामा आनन्दित हुन्छ । कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउन, सेमी लकडाउन वा नियन्त्रित जीवन बिताउनु परेपनि यो युगलाई हामीले खुसीसाथ स्वागत गर्नुको अर्र्काे बिकल्प छैन । खुसी पदार्थ नभएपनि पदार्थले खुसीको बाटोमा हिंड्न सहयोगी पक्कै हुन्छ । यो अवस्थामा जीवनलाई सार्थक बनाउन उल्लेखित बुँदा उपयोगी हुनेछन् ।
१.घरमा थर्मोमिटर, ब्लडप्रेसर सेट, पल्स अक्सिमिटर, ग्लुकोमिटर ९ सुगर जाँच्न ०, पारासिटामोल, खोकी तथा सास फेर्न सजिलो हुने औषधि राख्नुहोस् । खानेकुराको स्टक राख्नुहोस् , पानी, इन्टरनेट, बिजुली लगायतका अत्यावश्यक कुरा ब्यबस्था गर्नुहोस् । यसले तपाइंलाई तनावरहित बनाउनेछ ।
२. यो बेलामा तपाइंले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने अवसर हो । रक्सी, चुरोट, सुर्ती, गाँजा, स्लिपिंग ट्याब्लेट तथा अन्य लागु पदार्थ बिस्तारै घटाउँदै छोड्न सकिन्छ । त्यस्तै आफुले चाहे अनुसारको आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । जस्तैः तौल घटाउने वा बढाउने, ब्यायाम, योग, ध्यान, नाचगान आदि गर्ने । मधुमेह भएका व्यक्तिले कार्बोहाइड्रेट कम खाने, ब्लडप्रेसर भएका व्यक्तिले नुन, चिल्लो कम खाने आदि गरेर आफ्नो औषधिको मात्रा घटाउने यात्रामा जान सकिन्छ । यदि तपाईं रिसाहा हुनुहुन्छ भने रिसलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । हाँस्ने, जोक पढ्ने, कमेडी फ्लिम हेर्ने, आफ्नो सर्कल बढाउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । आफ्नो कामबाट तनाब भएको छ भने काम फेर्ने यो राम्रो अवसर हो । तँपाइले जीवनभर त्यहि काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसको लागि योजना बनाउने समय हामीसंग छ ।
३.सकारात्मक बिचार भएका, आशाबादी प्रकृति भएका तथा सहयोगी नयाँ साथी बनाउने, पुराना साथीहरुसंग सम्पर्क नबिकरण गर्ने र आफुसंग भएको क्षमता उजागर गर्ने यो उपयुक्त समय हो ।
४.तँपाईसँग केहि यस्ता उपयोगी बिषयहरु छन्, जुन अरुलाई पनि उपयोगी हुन्छन् । त्यस्ता बिषय सेयर गर्ने, आफुलाई थाहा भएका सुबिधा तथा अवसर अरुलाई जानकारी दिने लगायतका सामाजिक काम गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो ।
५.सकारात्मक कुरामा खुसी हुन सिक्नुहोस् । मनमा आउने काम, क्रोध, लोभ, मोहजस्ता मनोवृत्तिबाट आफुलाई अलग राख्ने प्रयत्न गर्नुहोस् । मेरो कसैसंग तुलना छैन, प्रतिष्पर्धा छैन, बैमनश्यता छैन, मनमुटाव छैन, पूर्वाग्रह छैन भन्ने भावलाई हुर्काउन प्रयत्न गर्नुहोस् । भ्रष्ट्राचार गर्ने, शोषण गर्ने, अप्रिय काम गर्ने लगायतका दुस्कर्म त्याग्ने यो राम्रो अवसर हो । हामीलाई थोरै कुराले पुग्दछ, जसरी अहिले पुगिरहेको छ । सबै मिलेर काम गर्ने, संगै बाँच्ने, संगै हाँस्ने संस्कार सिक्ने यो राम्रो मौका हो । आफुले गरेको गल्ती र अरुले आफुमाथि गरेको अन्यायप्रति क्षमाशील हुने यो राम्रो समय हो । आफु सुध्रिने यात्रा गाह्रो भएपनि यो अत्यन्तै सुन्दर छ ।
६.आफ्नो पारिवारिक जीवन सुन्दर बनाउने यो राम्रो अवसर हो । यो समयमा आफ्नो पारिवारिक सदस्यसंग जति सक्यो धेरै समय व्यतित गर्नुहोला । कुनै मिस अन्डरस्टान्डिन्ग छन् भने त्यसलाई विश्वासले जित्नुहोस । केटाकेटीसंग घुलमिल हुनुहोस् । दिनको आधा घण्टा उनीहरुलाई नैतिक शिक्षा, आफ्नो संस्कार, पारिवारिक महत्व तथा राष्ट्रप्रेम सिकाउनुहोस् । सबैजना मिलेर पकाउने, घर सफा गर्ने, करेसाबारीमा काम गर्ने तथा खेल्ने गर्नुहोस् । सबैको रुची अनुसारका फ्लिम हेर्नुहोस् । एकले अर्कोको रुचिलाई बुझ्दै तदनुसार आफुलाई लचक गराउनु भयो भने सबै परिवारको रुचि तथा दृष्टिकोण मिल्दै जानेछ । एक अर्कोको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस् । खुसी र चिन्ता बुझ्नुहोस् । यसले जीवन मधुर हुनेछ ।
७.कोरोना संक्रमणको महामारीले संसार ठप्प भएको छैन । आफ्नो समयमा सुर्योदय भएको छ, आफ्नो समयमा सुर्यास्त भएको छ । मानवजन्य प्रदुषणले विषाक्त भएको हावा स्वच्छ भएको छ, पशुपंक्षी रमाएका छन् । समुन्द्रमा माछाहरु नाचिरहेका छन् । फूल फुलेका छन, रुख सफा देखिएका छन्, अर्थात संसार चलिरहेको छ । तसर्थ स्वच्छ हावा, सफा प्रकृति आदि हजारौं चिजमा ब्यापक सुधार भएको छ । यो स्वच्छताको अनुभव लिएर खुसी हुन सिकौं । आहा भन्न सिकौं ।
८.हरेक पदार्थ तथा जीवको आयु हुन्छ । त्यो समयको आयु सकियो । यो समयको पनि आयु सकिनेछ । त्यसपछि अर्को समय आउनेछ । त्यो समयले हामीलाई पारिवारिक, प्रकृतिप्रेमि, सहयोगी तथा निर्लोभी बनाउनेछ । हामी सबैको जसरी जन्म हुन्छ, वृद्धि हुन्छ, रोग लाग्छ, मृत्यु हुन्छ, यो शाश्वत तथ्य हो । जति दिन हाम्रो स्वास्थ्यले धान्छ, त्यति दिन हामी बाँच्नेछौं । स्वास्थ्यले धान्न छोड्यो भने अरबौं खर्च गरेपनि हामीले मृत्युलाई टार्न सक्दैनौं । तसर्थ मृत्युप्रति सकारात्मक हुन हामीले सिक्नु पर्दछ । मृत्यु मोक्ष हो, समाधि हो, स्वर्ग हो ।
९.हामीले आफ्नो ब्रेनलाई फम्र्याट गर्नु जरुरी छ । हामीभित्र रहेको असन्तुष्टि, तृष्णा र महत्वाकांक्षालाई फम्र्याट गरेर मानवता, प्रेम र भाइचाराको सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु आबश्यक छ । त्यो तनावपूर्ण र मृगतृष्णारुपी जीवनलाई सरल र सरस बनाउने त्यो सफ्टवेयरले हामीलाई वास्तविक जीवनको आनन्द र अर्थ दिनेछ । माया, दया, करुणा, समबेदना, सह अस्तित्व, सदाचार तथा सात्विक जीवन बनाउने यात्रामा आजै लागौं ।
१०. कोरोना भाइरससंग हामीले डर मान्नुपर्दैन । कोरोना भाइरस हावाबाट उडेर आउने होइन । हामीलाई खोज्दै आउने होइन । संसारभर अझै ब्यापक भएपनि डर मान्नु पर्दैन । आफैलाई लागेपनि डर मान्नु पर्दैन । ३ प्रतिशत मृत्युदर भएको यो भाइरससंँग ३ लाख प्रतिशत त्रास मान्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीभित्रको क्षमता बलियो छ भने हामीले कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्छौं ्र। हामीभित्र क्षमता कमजोर छ भने कोरोना भाइरसले हामीलाई पराजित गर्छ । यो विजय र पराजयको यात्रा पहिले पनि थियो, पछि पनि हुनेछ । जन्मेदेखि नै हामी लड्दै आएका छौं, कमजोरलाई जित्दै आएका छौं, बलियोसँग पराजित हुँदै आएका छौं । यो नियमित प्रक्रियालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
११.एकदिन हामी सबै यो भाइरससंग जम्काभेट हुनु नै छ । रोगको रुपमा वा खोपको रुपमा । यो भाइरसले थोरैलाई मार्नेछ, धेरैलाई बचाउनेछ – एन्टिबोडी बनाएर ।